Ukusebenza kumzi mveliso wokuHamba ngexesha leCoronavirus: Ukuguqula ukuTyekiswa kwezoKhenketho kuye kwiNdwendwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ukusebenza kumzi mveliso wokuHamba ngexesha leCoronavirus: Ukuguqula ukuTyekiswa kwezoKhenketho kuye kwiNdwendwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • lomhleli • Utyalo mali • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuhambela ngaphandle kwaba yindawo yokuthetha enkulu kwinyanga ephelileyo. Namhlanje, phantsi kokhenketho sesona sisongelo kuqoqosho oluninzi oluxhomekeke kukhenketho.
Alithandabuzeki elokuba abantu abasebenza kushishino lokhenketho baphantsi koxinzelelo olukhulu. Ayinyanzelekanga ukuba ibonelele ngenkonzo yabathengi kuwo onke amanqanaba, kodwa nabahambi banexhala kwaye bahlala bekhupha uxinzelelo lwabo kubasebenzi bezokhenketho, ngakumbi abo bakwangaphambili
Kude kube kutshanje inani labahambi liya lisanda ngokwanda kwaye bekukho nolunye uhambiso lwentengiso kwilizwe jikelele. Ke kwisithuba seenyanga ezimbalwa, i-Covid-19 yajika ukhenketho lwaba ngabangaphantsi kokhenketho kwaye abasebenzi bezokhenketho baqala ukuzibuza ukuba bazokuyifumana na imisebenzi. Iinqwelo-moya zilinqumle inani leenqwelo-moya ngokuqatha, iihotele ebezigcwele ngoku ziphantse zayinto engenamntu, kwaye amazwe aliqela enze umda wesizwe okanye wengingqi. Ukusuka kumaziko amakhulu okutya afana neFrance kunye ne-Israel evala iivenkile zokumisa iindwendwe kwiiPropathi zeDisney, ukhenketho olugqithisileyo lutshintshile kwaye ngoku bonke abo basebenza kolu shishino lukhulu emhlabeni baxhalabile ngokusinda kwemizi-mveliso Izolo ukwenziwa kwamazwe ngamazwe kwakuthetha ukuba ukhenketho Abasebenzi beshishini basebenze kwinkcubeko kunye nakwiilwimi ezininzi. Ngoku ubume bamanye amazwe buye bathetha ukuhanjiswa kweCoronavirus ukusuka kolunye uhlanga kuye kolunye ilizwe njengoko ilizwe emva kwelinye livala imida yalo kubantu bamanye amazwe kwaye lifuna ixesha lokubuya ekhaya kubemi balo abavela kwilizwe langaphandle.
Namhlanje abo basebenza kwishishini lokuhamba nelokubuka iindwendwe basebenza "kwiminyaka yomsindo" okanye "kwixesha loloyiko".
Isenokungabi yinto yokuzibaxa into yokuba uhambo kukuphazamiseka, ukuba nomsindo, okanye ukuxhalaba. Abakhenkethi banengxaki yokwanda. Amaxesha amaninzi baziva bephethwe kakubi ziinqwelomoya okanye endleleni; bafika kwindawo abalala kuyo bediniwe kwaye belambile, bedidekile kwaye bekulungele ukuqokelela phantse wonke umntu. Amaxesha amaninzi xa befika apho baya khona kwaye benokunxibelelana nendawo yokuhlala okanye abaqeqeshi bevenkile zokutyela bakulungele ngokungafanelekanga ukuqhuma okona kusilela kuncinci okanye into engahambi kakuhle.
Oku kunyuka komsindo kubangelwe kukuphinda kubekho kubasebenzi bezokhenketho ekufuneka bejongane yonke imihla neendwendwe ezinomsindo kunye neendwendwe. Ewe xa sijonga iiyure ezinde ekufuneka zenziwe ziingcali kwezokhenketho, isidingo sabo sokuncuma nokuba bangaziva njani ngokwasemoyeni okanye ngokwasemzimbeni, kunye noxinzelelo abaphantsi kokuhlangabezana nexesha elifunekayo, sonke kufuneka simangaliswe kukwazi kwabo "ukuhlala bepholile phantsi umlilo. ”
Ilizwe lomsindo kufuneka libe yinkxalabo kwiingcali zokhenketho. Ukuba ngabantu abaziincutshe ekubukeni iindwendwe nabo bayachaphazeleka kwesi sifo somsindo kwaye le ngqumbo iphindaphindayo isinike igama elitsha: "Ezokhenketho / Ukwamkelwa kwabaNgcali kwabaSebenzi (i-TPER)." Ngokwezentlalo, sinokubeka i-TPER phakathi kwemicimbi yobundlobongela emsebenzini kunye nobukrwada bomqeshwa. I-TPER ingaphezulu komcimbi wenkonzo yabathengi abahluphekileyo. I-TPER luhlobo lwentaba-mlilo olulele ngezantsi nje komphezulu womntu ngokwengqondo. Ngumsindo odityaniswe nokudana nokudinwa okuzibonakalisa phakathi kwabantu ekufuneka besebenzela uluntu rhoqo kwaye bahlala beziva bengaxatyiswanga. I-TPER inokwenzeka kwakhona nabo banxibelelana nomzi mveliso wokuhamba nokhenketho / wokubuka iindwendwe, kodwa abaziboni njengenxalenye ethe ngqo yomzi mveliso. Imizekelo yabo bantu ngamagosa asebupoliseni asebenza kwiindawo eziphakamileyo zokhenketho, abantu abasebenza kwizikhululo zeebhasi okanye zoololiwe, nakwiihotele ezingekho ngaphambili nabasebenzi abatsala umdla.
Kwilixa apho urhulumente acela ukudideka kwezentlalo kodwa kubuchwephesha apho ukuphazamiseka kwezentlalo kuyinto engenakwenzeka uninzi lwabasebenzi bezokhenketho banxunguphele kwaye bazibona ngathi bahlawulwa kancinci kwaye abathandwa. Ngenxa yokuba i-TPER inokutshabalalisa indawo enendawo yoluntu kwezokhenketho kubalulekile ukuba abaphathi bazi imiqondiso ye-TPER kwaye baqale ukujongana nengxaki. Nazi ezinye zeempawu kunye neengcebiso ezinokukunceda.
Zonke iisuphavayiza / umphathi wee-motel kufuneka azi zonke iinkalo zemisebenzi yakhe kwindawo yezokhenketho kwaye aqonde olo phazamiseko lomsebenzi okokuqala. Oko kuthetha ukuba wonke umntu osebenzela ukubuk 'iindwendwe kufuneka achithe okungenani usuku lube lunye kumsebenzi wepropathi, njengoweta okanye umgcini weweyitala, ukusebenza njengentsimbi, ukuba kwindawo yokugcina imali, amagumbi okucoca nokulungisa. Kuphela kusemva kokwenza umsebenzi apho abaphathi banokuqalisa ukubonelela ngezisombululo zokwenyani kwimiba ye-TPER
Wonke umntu osebenza kwindawo yokuhlala, indawo yokutyela, okanye umtsalane kufanelekile ukuba afumane uqeqesho kwisayensi yenkonzo yabathengi. Uqeqesho akufuneki lube kuphela kwabo babambe imisebenzi engaphambili. Ngokwenyani wonke umntu osebenza ehotele / kwi-motel unonxibelelwano noluntu. Rhoqo abantu abaphethwe zi-TPER baye baqeqeshwa ngokwaneleyo kubudlelwane phakathi kwenkonzo elungileyo yabathengi kunye nomsebenzi wabo. Bonke abasebenzi behotele / bee-motel bafanele ilungelo lokufundiswa ngeendlela ezinje:
Ukulungiswa kwelizwi kunye nobukhulu
Uyenza njani into ebonakalayo yokuqala
Ujongana njani nokudana, ixhala lomntu kunye nomsindo
Inqaku lokugqibela libaluleke ngokukodwa kubudala bezifo ezosulelayo kunye nokungaqiniseki okukhulu kwezezimali
Kule minyaka ikhoyo ngoku, kubalulekile ukubonelela kungekuphela ngenkxaso evela kubaphathi kodwa nakwabo usebenza nabo. Namhlanje abo basebenza kumzi-mveliso wokhenketho bafuna inkxaso engaphezulu yengqondo kunye nokuqonda okuhlangeneyo kunangaphambili. Abaqeqeshi bokungenisa izihambi kufuneka banciphise uxinzelelo lomnye nomnye, kwaye abaphathi kufuneka bancede ngokubonelela ngekhefu kwishedyuli yomsebenzi, ngokudlala umculo othobekileyo, kunye nokukhuthaza ngexesha lokungasebenzi kunye nokuphefumla. Kukwabalulekile ukuba bonke abasebenza kwezokhenketho nakwimizi-mveliso yeendwendwe babe nokufikelela kwiingcebiso zonyango nakubasebenzi.
Kule minyaka intsha yoxinzelelo kunye nokungaqiniseki, kububulumko ukuhlela iiseshoni ze-gab. Rhoqo abasebenzi abanamntu wokuthetha malunga nokukhathazeka kunye nobunzima babo emsebenzini. Ukubonelela ngeeseshoni apho abantu banokwabelana "ngamabali abo emfazwe" kunye nokutshintshiselana ngezimvo ngendlela abanokulwenza ngcono ngayo uluntu ngokuzikhonza ngokwabo kungahamba indlela ende ekupheliseni uloyiko kunye nokudana abantu abaninzi abaziva ngoku.
Kufuneka siqinisekise ukuba iingcali zethu kwezokhenketho zisebenza kwiindawo ezikhanyiswe kakuhle nezilawulwa ngamaqondo obushushu. Kunzima ngokwaneleyo ukujongana neendwendwe ezidiniweyo nezidimazekileyo phantsi kweyona meko intle, kodwa ukusebenza kubushushu behlobo okanye ingqele yasebusika ngokuqinisekileyo kuya kukonyusa uxinzelelo kunye nomsindo.
Asimele silibale ukuba iindwendwe zethu azizizo iintshaba zethu. Rhoqo uninzi lweengcali zokhenketho ziyalibala ukuba umthengi sisizathu sokuba sibe nomsebenzi. Ngelixa abasebenzi kufuneka beveze, kubalulekile ukuba kubekho iindlela apho oku kuvota kungathunyelwa khona kwiindlela ezilungileyo. Iiseshoni zabasebenzi abaqeqeshiweyo kufanele ukuba zibe lithuba lokufumana isisombululo kwiingxaki kunye nokunyanzelisa inyani yokuba iinjineli zehotele / zee-motel ziyinxalenye yeqela.
Umzi mveliso wokuhamba kunye nowokubuk 'iindwendwe unokuba ngumzi mveliso onomdla wokusebenza okanye onokuba uphazamise. Ngokusebenza kunye nokuncedana ukujongana nemiba yoxinzelelo kunye nokukhathazeka, singathintela ingqumbo yabasebenzi bezokhenketho, uloyiko kunye noxinzelelo ekutshabalaliseni imeko yempangelo kwaye sinike inkathalo efunwa ngabathengi bethu ngexesha lobhubhane kunye nokungaqiniseki kwezoqoqosho.
Ulwazi oluthe kratya malunga nendlela uGqirha Peter Tarlow kunye neNkqubo yokuPhendula okukhawulezileyo yoKhuseleko unokunceda ukutyelela www.wfwasecity.com